IYunivesithi ubuhlobo bayo kunye neengcali zeCartographer - Geofumadas
University ubuhlobo Cartographer yam
Agasti, 2013 Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS
Xa kuqwalaselwa Ukudaleka ulwazi lwenzululwazi kunye nobuchwepheshe, phambili, kanye ukucupha ezintsha lweenkqubo zobuchwepheshe lamakhonkco hlabathi jikelele kubalulekile ukuba phambili uqeqesho kwizifundo abantu bakwazi ukuphendula kwiimfuno ezahlukeneyo indawo, ukususela ngombono webala, ngeendlela eziphathekayo, ezinengqondo, ezinokwenza izinto kunye nezobuchule kwiinkqubo zokubanjwa, ukuhanjiswa, ukuhlalutya, ukulawulwa nokumelelwa kolwazi lwendalo; yintoni namhlanje esiyifumanayo neCartographer.
Le yimeko yeYunivesithi yaseMetropolitan Technologies yeSizwe saseChile, esiza kuthunyelwa ngokukhawuleza kwiCartographer-Geomatics, ubugcisa obuya kuvela kunyaka 2014
Phantsi kwephiko le-University of Chile, iziko lemfundo ephakamileyo kazwelonke, uluntu kunye nesimilo mdala kweli lizwe (ezazilapha 1842) kuba kulapho iqala ukuba ubonakale imfuneko yabasebenzi ngaphakathi entsimini Geography . Kukho apho kudala ukudala umsebenzi weCrographic, kuxhomekeke kwiSebe leJografi lendlu yezifundo.
Ngubani wayecinga ukuba lo 1960 ekuqaleni, Chile ifuna kugqirha ukuba umelo olufanelekileyo nangokusulela ezikhoyo nezinto kwintsimi, nayo leyo njengentsika ebalulekileyo kwezinye iinkalo efuna ukumelwa zokuzoba of iziganeko ezithile kunye / okanye iinkqubo zenzululwazi zendalo okanye zentlalo (Economists, Botanists, Geologists, Urbanists, Physicians phakathi kwabanye); sithetha ngeCartographer.
Kamva kwiminyaka elishumi ye-1980, ukusuka ekuhlaziyweni kwiMfundo ePhakamileyo eyenziwa eChile, iSikole soPhuhliso seSantiago (IPS) sidalwe. Umsebenzi weCrotography evela kwiYunivesithi yaseChile ichazwe kweli candelo elitsha ngelixa liqwalasela iinkalo zenzululwazi nezobuchwepheshe zolo xesha. Isikolo seKrotography, ngelo xesha, njengeyunithi yemfundo ilungele ukufezekiswa kokufundisa, uphando, ukwandiswa kunye noxanduva lobuchwepheshe kwiikhokelo ezikuMsebenzi weSikolo.
Ngonyaka we-1993, iYunivesithi yeMetropolitan Technological ye-State of Chile yadalwa (UTEM) isikhungo esiya kuthi kube ngumhla, siye saba ngumqhubi kunye nendlalifa yelifa lomsebenzi weCrotragraphy; umzimba oye wakwazi ukuqeqesha abaCartographer of excellence ngendlela efanelekileyo, ngokugxininisa kwiSayensi, kwezobuGcisa noLwazi lweNtlalontle ngeziganeko ezenzeka kweli lizwe.
Cartography, njengokuba Science eChile, ilungiselelwa kuphela kwiziko UTEM leMfundo ePhakamileyo noQeqesho i-State of Chile kunye ejongene iingongoma mngeni emitsha ukuze nasekusungulweni ilifa layo kwezemfundo Professional Institute of eSantiago kunye Universidad de Chile
IYunivesithi yaseMetropolitan Technologies yeSizwe saseChile, cartography nekamva.
Namhlanje, njengoko beemaphu, siyazi ukuba simele yokuhlalisana kunye basebenzisane kunye nezinye iingcali Earth Sciences (zejografi, Geodesy, Geomensores, Geomatics phakathi kwabanye), nto leyo kunye ukubandakanyeka kwinkqubo yokuqokelela kunye nocazululo data ngeenjongo ezahlukeneyo, kodwa kunikezelwa ukuba iinjongo zabo zoleko zibalekela ukuveliswa kweemveliso zemibala; umsebenzi ovela kwimvelaphi uqobo kunye ne-Cartography.
Ngenxa yoku kungasentla, ingekukuba ukusuka kwindawo uzobe olwenziwe ngokwenzululwazi kwaye namaxesha kufuna umsebenzi ofanelekileyo ukucwangcisa, ukulawula, ukuvavanya kunye nokuphuhlisa iiprojekthi ezinegalelo ulwazi mmandla kunye izisombululo nolawulo kunye nozinzo ngokusebenzisa umgangatho wedatha kunye nokusebenza kwemeko yalo.
I-Metropolitan Technological University of the State of Chile wayeyazi loo nto ithatha mngeni kwaye lizibophelele ngokusebenzisa i-School of cartography ukuba negalelo kuphuhliso likazwelonke ukulungiselela ikamva Cartographer Geomatics.
Uqaphele ukuba kwenzeka ntoni na kokusingqongileyo zangaphandle, njengoko kweyunithi emfundo kunye namalungu eKomiti Redesign yekharityhulam Career Mapping, siba yinxalenye yeConvenco kwangethuba iingcamango ezintsha, iindlela ezintsha, ulwazi kunye nokusetyenziswa izixhobo zakhe zezeteknoloji ngomsebenzi wabo , kunye neyona nto ibalulekileyo: Ukuphuhlisa umfundi inxaxheba yophando, zombini ngokuzimela kunye nokungahambisani namanye amazwe, ngokusebenzisa iScientific Method kunye neendlela ezihambelanayo.
Ukuqhubekisa ukuhlaziywa kwekharityhulam yangoku, siye saqwalasela uluvo kunye neminikelo yezinto eziphambili zokumisela umzekelo kunye nokubonelela ngekharityhulam elifanelekileyo ngokweemfuno zelizwe. Izifundo, abaFundi, abaqeshi, abaCartographer ekusebenziseni ubuGcisa, abaSebenzi beGeosciences, phakathi kwabanye baye bancedisa "ingqolowa yesihlabathi "
Enyanisweni, kunye nokuhlaziywa okukhankanywe ngasentla kwekharityhulam le mngeni omtsha uhambelana nomzekelo omtsha wezemfundo, obeka umfundi njengomgangatho wenkqubo yokufunda; Isikhokelo esisetyenziswa kwiiyunivesithi ezahlukeneyo zeSizwe saseChile ngenxa yokuphucula inkqubo yokufundisa nokufunda.
mngeni wethu naye ukuba ibe kwimeko cartographer yangoku zobungcali kunye nokwandisa elizayo Cartographer Geomatics iziqu UTEM njengengxenye esemqoka zasesekondari zobungcali yobungcali ephambili kwiinkqubo processing zokuzoba, abafundi zokuzoba imveliso kunye nokulawulwa komhlaba kwemfundo yaseprayimari, nezinto zalo ezinxulumene .
Konke lo msebenzi weKharityhulam woBuhlengahlengiso kufuneka uboniswe kwisiphumo esilandelayo:
INKQUBO: I-Faculty of Humanities kunye noLwazi loLwazi loLwazi
ISIKOLO: ISchool of Cartography
IGAMA LENKQUBO YOKUFUNDA: Iiprotography kunye neGeomatics
IINGCACISO ZEMFUNDO: I-Bachelor yeCartographic and Geomatics Sciences
I-TITLE YEPHARITYHULAM: I-Geometatic cartographer
ISITYHULU ESIKHULUMENTE: I-University Technician kwiGeomatics
IDiploma kwi-Geographic Information TechnologiesI-Diploma kuLawulo loLwazi lweTeritorialI-Diploma kwiCrographic Environmental Management
ISICWANGCISO SESICWANGCISO: Rhoqo
NGESIKHATHI: I-10 Semesters
ITYPE YEMALI: I-PSU (Uvavanyo lweYunivesithi, iNkqubo yokungena kwiiyunivesithi zase-Chile).
IZIFUNDO ZONKE: 58
IZIFUNDO ZONKE ZESIKOLO: 300 Sct (ingadluliselwa Credit System liyangqinelana ukwabiwa komsebenzi wesikolo umfundi, indlela eya kuqaliswa kwixesha elizayo kwiiyunivesithi eli lizwe.
Ekugqibeleni, chaza ukuba ekupheleni kuka Agasti 2013 ikharityhulam Omele ukuba luvunywe yi kwimibutho eyahlukeneyo lonxibelelwano lwe UTEM (Faculty Council, iBhunga Academic neBhunga), kungekudala ukuze zifakwe ngaphakathi oluza kokulindelwe yokwamkelwa 2014, eya kubakho iphulo ngamandla kumajelo eendaba, kwakunye nabantu kwiimeko intlanganiso Geosciences.
Amalungu eKomiti yekharityhulam Redesign Career Mapping, ndiyabulela kuwe ixesha elichithwa ekufundeni kulo mzobo, nize isimemo eso nisamkele, xa ufuna ingcaciso engaphezulu malunga nomsebenzi iphuhlisiwe, ukuba uqhagamshelane iposi esc.cartografia@utem.cl
Egameni leKharmish Redesign Commission ye-Cartography Career, unomdla ngokumnene ngomfundi;
NGUJUAN NAVARRO MUNDACA
Umfundi weDrakret of Cartography
IYunivesithi yeTheknoloji yeTeknoloji yeSizwe saseChile
ISantiago de Chile, Agasti ka-2.013
Post edlulileyo«Edlulileyo Bentley: izicelo Mobile kunye nabasebenzisi-kungekhona DGN-
Post Next UkuPhathwa koMhlaba: indlela ye-LGAFOkulandelayo "